Nhau - Gaoji Nhau dzevhiki 20210126
Sezvo isu tave kuda kuve neChina Chitubu Mutambo zororo munaFebruary, basa rebazi rega rega rakave rakagadzikana kupfuura nakare.
1. Muvhiki yapfuura tapedza anopfuura makumi manomwe makumi mana maodha ekutenga.
Makumi makumi mashanu nemasere e multifunction busbar kugadzira muchina yemhando dzakasiyana;
7 zvikamu zve servo yakakotama muchina;
4 zvikamu zve busbar yekugaya muchina ；
Zvikamu zvisere zvebhasera kubaya uye yekucheka muchina.
2. Matanho matanhatu eODM busbar kugadzira mutsara anotanga kuungana. Aya mabara ekugadzirisa mabara akarairwa nevatengi vakasiyana kubva kuHebei neZhejiang dunhu. Zvikamu zveaya mayunitsi zvakachinja kuzadzisa zvakasiyana zvinodiwa pane zvekushandisa mashandiro, zvishandiso kusarudzwa, uye kutaridzika dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
3. Yekutsvagisa uye Yekuvandudza hofisi yeShandong Gaoji kambani inoita budiriro mune nyowani corollary michina, iyo corollary michina yeyakazara otomatiki busbar kugadzira mutsara nhanho kupinda mune nyowani yekuyedza nhanho.
4. NaNdira 22, nekuda kwedambudziko mamiriro, INT kurongeka kunodzora ingangoita makumi matatu muzana zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura. Kune rimwe divi, purofiti kubva kuindasitiri yekudzoreredza hurongwa hwehurumende, mutemo wepamba unoramba uchikwira kubva munaJun 2020, kutengesa kwakaenzana kuenzaniswa negore rapfuura.